Wararka Maanta: Arbaco, May 2 , 2012-Badow xalay ka dhaqan galay Degmada Dhuusa-mareeb ee Gobolka Galguduud kaddib Ismiidaamintii shalay ka dhacay
Mas’uuliyiinta maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa sheegay in Bandowga lagu soo rogay degmada Dhuusa-mareeb uu ahaa mid lagu xaqiinayo amaanka degmada, iyadoo la mamnuucay isku socodka dadka iyo gadiidka.
Maalintii shalay galinkii danbe ayaa qof naftiis hure ah waxaa uu weerar ku qaaday goob maqaaxi ah oo ay fadhiyeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo rag siyaasiyiin ah oo maalmihii ugu danbeeyayba socdaal ku marayay qeybo ka mid ah gobollada dhexe, waxaana weerarkaa ku naf-waayay Shan ruux oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Yuusuf Mirre Seeraar iyo xildhibaan C/wali Shiikh Max’ed Aw- Max’uud.
Sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay Siyaasiga Axmed C/salaan Xaaji Aadan oo horkacayay wafdiga ama mas’uuliyiinta maalintii shalay weerarka lagu qaaday, waxaana sidoo kale halkaa iyagana ku dhaawacmay xildhibaan Gen C/risaaq Isaaq Biixi iyo xildhibaan Xusseen Samatar.
Daahir Amiin Jeesoow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo goob-joog u ahaa dhacdadii shalay ayaa sheegay in uu arkayay qof weerarka Ismiidaaminta ah geystay ka hor inta uusan is qarxin.
"Anniga waxaa ay Idhaheygu qabteen wiil dhalinyarro ah oo laamiga soo goynaya, dhinaceena ayuu u soo dhaqaaqay, waxaa uu afka ku sitay Khaad, meel aan naga fogeyn ayuu soo istaagay, kadibna waxaan ka war-helay isaga oo mar kaliya ku dhawaaqaya Allaahu Akbar qaraxa ayaana dhacay," ayuu yiri xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Waxaa uu intaa ku darray xildhibaanka in maanta la aasayo mudanayaashii baarlamaanka iyo dadkii kale ee ku dhintay weerarkaas, waxaana uu amaan u soo jeediyay ciidamada maamulka Ahlu Sunna Waljameeca oo uu sheegay in ay ku dadaalayeen sugida amaanka kadib markii uu qaraxu dhacay.
Dadka ku dhaqan degmada Dhuusa-mareeb ayaa sheegay in weerarka ka dhacay shalay degmada Dhuusa-mareeb uu ahaa kii ugu horeeyay ee ka dhacay degmada, maadaama ay markii hore dhagta uun ka maqli jireen weerarada noocaas oo kale ah.